नरेन्द्र मोदी र ममता बनर्जी आमुन्ने सामुन्ने, आयोगले चाल्यो कडा कदम ! | Ratopati
नरेन्द्र मोदी र ममता बनर्जी आमुन्ने सामुन्ने, आयोगले चाल्यो कडा कदम !
एजेन्सी-भारतमा लोकसभा निर्वाचन जारी छ । ६ चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई सातौं चरणको संघारको निर्वाचनमा भारत होमिएको छ । मे १९ मा हुने सातौं चरणको निर्वाचनमा ५९ लोकसभा सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । देशभर निर्वाचन हुन बाँकी रहेका ५९ सिटहरुमध्ये पश्चिम बंगालको निर्वाचन क्षेत्रले अहिले सबैको ध्यान तानिरहेको छ ।